Kungani ngithola umugqa oqondile esikrinini sami seselula? | Iziqondiso ze-Android
Kungani ngithola umugqa oqondile esikrinini sami seselula?
UCristian Garcia | 20/01/2022 09:51 | Kubuyekezwe ku- 21/01/2022 13:43 | Okokufundisa kwe-Android
Uma usufinyelele lesi sihloko, ngithemba ukuthi kusenethemba lokuthi uzokwazi ukulungisa inkinga esiyichaze esihlokweni, okungukuthi, Ngithola umugqa oqondile esikrinini seselula futhi angazi ukuthi ngingayilungisa kanjani, inkinga iwukuthi ingikhathaza kakhulu. Uma ukulelo qembu elineshwa labantu abahlushwa yilokhu okubi kokuklwebheka kwesikrini sefoni noma ezinye izinkinga ezifanayo ezithinta isikrini sefoni nokuboniswa kwayo okulungile, sizozama ukukusiza.
Lesi sicefe singabangelwa izinkinga nezimbangela ezahlukene, iphuzu ukuzama ukukulungisa kalula futhi ngokushibhile ngangokunokwenzeka ukuze i-LCD yeselula onayo ezandleni zakho iqhubeke nokusetshenziswa ngaphandle kwenkinga. Imvamisa imithende oyibonayo, evundlile neqondile, ivamise ukudalwa ukwehluleka kuyo isofthiwe noma ihadiwe ocingweni lwakho. Into evamile kakhulu eqinisweni ukuthi ngenxa yokushaywa okuthile, i-LCD yeselula ingasebenzi kahle futhi iphukile futhi kufanele ishintshwe. Nakuba ngezinye izikhathi, njengoba bengisho, ingavela kusofthiwe futhi yingakho amaphikseli ahlukene amathoni angajwayelekile evela, okuyiphutha elicasulayo kakhulu.
Ukubuyekezwa Komvikeli Wesikrini se-Hydrogel: Ingabe Kungcono Kunabanye?
Ngenxa yalesi sizathu futhi njengoba sikuthembisile, sizozama ukuqinisekisa ukuthi awuzange ufake i-athikili futhi uhlale unjalo. Sizophakamisa izixazululo ezahlukene ephutheni elicasulayo lokuthi uthola umugqa oqondile esikrinini seselula, ngisho nangesinye isikhathi ovundlile. Masingene kwezamabhizinisi futhi sizame ukukulungisa.
1 Kungani ngithola umugqa oqondile esikrinini sami seselula? Izixazululo ezihlukene zephutha
1.1 Unesikrini esiqhekekile - ukwehluleka kwehadiwe
1.2 Vala bese uqala kabusha iselula
1.3 Buyisela iselula bese uyishiya inamanani asefekthri
1.4 Ezinye izixazululo ezingajwayelekile nezisheshayo
Kungani ngithola umugqa oqondile esikrinini sami seselula? Izixazululo ezihlukene zephutha
Okubalulekile ukuthi uzame futhi uzame izindlela ezahlukene uze uthole leyo ekusebenzelayo, ngoba akuwona wonke ama-screens aphukayo noma afinyelela ukwehluleka ngendlela efanayo. Ngakho ungakhungatheki uma isixazululo sokuqala singasebenzi kuwe noma ungazi ukuthi ukwenze kanjani, okuthi uma kunjalo, ubuze ebhokisini lokuphawula elisekupheleni kwesihloko ukuze sikuphendule. Uma ubona ukuthi ikusebenzela, sitshele futhi ukuthi bekuyini indlela elungile nokuthi bekuyini iphutha lakho, ukuze sikwazi ukushuna kahle isixazululo ngasinye esihlongozwayo. Siya lapho nazo zonke izixazululo ukuze ukwazi ukulungisa umakhalekhukhwini kanye neskrini sawo se-LCD.
Unesikrini esiqhekekile - ukwehluleka kwehadiwe
Lokhu kungase kuvame kakhulu njengoba ekwindla okukodwa noma kunoma yikuphi ukushaywa okubi okunikezwa isikrini nganoma yiluphi usuku olunikeziwe, kungonakaliswa futhi kudinga ukushintshwa. Uma ngemva kwaleyo mithende emhlophe eqondile noma evundlile yemibala eminingi iqala ukubonakala, singaqhubeka siqinisekisa ukuphuka.. Ngaphezu kwalokho, futhi lokhu kusobala kakhulu njengoba ungacabanga, kodwa uma kwenzeka kufanele sikusho: uma unesikrini esiqhekekile, nakanjani unesikrini sefoni ephathekayo esiphukile futhi sizodinga ukushintshwa okuphuthumayo.
Kuzodingeka ushintshe ingxenye ngokuphelele futhi kulokhu uzodinga kuqala ukuthola mayelana nemodeli yakho, isiphi isikrini esisebenzisayo futhi ubheke okokufundisa okuhlukile ezisekelweni ezifana ne-YouTube ukuze uguqule leso sikrini se-LCD isinyathelo ngesinyathelo. Mhlawumbe yindlela oyilungisa ngayo leyo. Noma ngokuphambene nalokho, ungase udinge usizo lobuchwepheshe futhi kufanele ukukhokhele. Kungukuzikhethela kwakho. MOmakhalekhukhwini abaningi abayona inkimbinkimbi nhlobo ukuwavula.
Vala bese uqala kabusha iselula
Uma kuyinkinga yesofthiwe, kungenzeka ukuthi ngokuqalisa kabusha okulula singalungisa iphutha olishoyo lokuthi "Ngithola umugqa oqondile esikrinini seselula" noma ngisho ovundlile kanye nemibala ehlukahlukene. Ukuze uqalise kabusha ifoni, asicabangi ukuthi sidinga ukukuchazela, kodwa uma kwenzeka, usuyazi ukuthi ngokucindezela inkinobho yamandla imizuzwana embalwa uzokwazi ukuqala kabusha ifoni. Uma ungafuni ukuyiqalisa kabusha, ungayivala amahora ambalwa bese uyivula futhi ukuze ilale uma ungalokothi wenze lesi senzo.
Buyisela iselula bese uyishiya inamanani asefekthri
Enye yezinto zakudala uma kuziwa ekuxazululeni amaphutha amaningi kusoftware uwukubuyisela ngokuphelele umakhalekhukhwini. Ngale ndlela uzoqinisekisa ukuthi umakhalekhukhwini wakho uhlala ufana ncamashi nosuku owalukhipha ngalo efekthri, ukhuluma njalo nge-software ecacile, ukugqokwa kwe-hardware akunakugwenywa futhi kuyohlale kukhona ngenxa yeqiniso nje lokuyisebenzisa nsuku zonke..
Sicela uqaphele ukuthi lapho ubuyisela umakhalekhukhwini uzosula ngokuphelele konke okuqukethwe obunakho, okungukuthi, zonke izinhlelo zokusebenza ezifakiwe, zonke izithombe, wonke amafayela aqukethe, azosuswa ngokuphelele. Ngakho-ke, ngaphambi kokwenza lokhu, zama ukulondoloza yonke leyo datha endaweni ethile uma ufuna ukuyigcina. Vele wenze ikhophi yasenqolobaneni efwini, iyona ntofontofo kakhulu. Kungenzeka ukuthi ngale ndlela engikutholayo umugqa oqondile esikrinini seselula uphela ngokushesha. Isandla esingcwele sibuyisela ifoni.
Ezinye izixazululo ezingajwayelekile nezisheshayo
Cindezela isikrini, uma sinyakaza, kungenzeka singaxhumani
Hlola ukuthi iphutha alibangelwa ezinye izinhlelo zokusebenza ezifakiwe
Kubiza malini ukulungisa iselula
Sithemba ukuthi lesi sihloko sendlela yokulungisa leso siphazamisi esikhulu lapho kuvela khona imidwa eqondile nevundlile yemibala ehlukene esikrinini sakho seselula silungiswe ngokuphelele. Uma unokungabaza, imibuzo noma iziphakamiso mayelana nalesi sihloko noma ufuna ukwazi okwengeziwe ngezinye izixazululo zalokhu, ungakushiya ebhokisini lokuphawula ozolithola ngezansi. Sizokubona esihlokweni esilandelayo se-Android Guides. Siyabonga ngokusifunda.
Indlela ephelele ye-athikili: Imihlahlandlela ye-Android » Okokufundisa kwe-Android » Kungani ngithola umugqa oqondile esikrinini sami seselula?
Ungayisebenzisa kanjani i-WhatsApp ku-iPad ngaphandle kwe-SIM
Ezinye izindlela ezingu-8 eziphezulu ze-Spotify